siifsiin_ – Page 12 – siifsiin
Xaxee nu gaadi’ee utuu qabnuu kaayyoo Hardha haalli yeroo nu fakkeessus laayyoo Garuu laayyoo miti, nu saba jabaadha Warra tumaa Gadaa adduunyaan nu beeku, ilmaan Oromoodha. Sanyiin keenya hinbadne,warra badus miti Dagaagnee adduunyaa warra dhaalu nuti. Kakuu baduu hinqabnu,hinbadnu jarana Nuti ilmaan Oromoo akkasitti amanna. Dhufaatii keenyatu warra badu miti madda keenya beekna Haala Oromummaan … Continue reading Warra badu miti
Mirgaa Namummaa Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. SEENSA Ulfinni fi wal-qixxummaan ilmoo namaa kan uummattoota hundaa akka ifatti kabajamu gochuun bu'ura bilisummaa, haqaa fi nageenya addunyaa waan ta'eef; Mirga namummaa irra ijjechuun yookaan tuffachuun yeroo hunda jeequmsa badiisa … Continue reading Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa
Siifsiin Website/facebook mataa isheetiin ergaa addaa addaa qabattee dhiyaattee jirti, ergawwan ishees, barnoota, beekumsa adda addaa fi Asoosama akkasumas walaloowwan uummata boo’aarsan of keessatti qabattee jirti , isinis akkuma kanaan duraa yaada keessan karaa websitii keenyaa like gochuun, barreessuun barnoota ga’aas argachuu dandeessu.
Firii miiraa fi Gocha Hamaa
Dubartoota Obboleeyyii Sadeen Wagoota hedduun dura namoota miiraa fi gocha hamaa hannaatiin hiriyooman sadituu ture. Hirriyoonni hojjii hannaa irratti bobba’an kunis waggoota hedduuf hojii hannaa fi abaaramaa ta’e kana madda galii jireenya isaanii godhachuudhaan waliin socho’aa turan. Otuma akkanatti waliin hataa jiraatanii gaafa tokko abbaa milkii ta’anii warqii fi birrii sanduuqa isaa waliin suuqii tokko … Continue reading Firii miiraa fi Gocha Hamaa
“OF JIBBITUUN NAMA HIN JAALLATTU!”
“Of jibbituun nama hin jaallattu” jedha Oromoon dhimma walitti dhufeenya hawaasa gidduu irratti yeroo dubbatu. Himni kun (statement) dhaamsa guddaa qaba. Ogeessotni xiinsammu (psychology/psychiatry) maal akka jedhan hin beeku malee hiikni dhimma kanaa ballaa dha. Ummatni Oromoos hagam akka dubbii achi fageessee ilaalu nu hubachiisa. Egaa ka’umsi dubbii kanaa ‘namni of jaallata’ waan jedhu mullisa. … Continue reading “OF JIBBITUUN NAMA HIN JAALLATTU!”
1.Caaltuu: Ulee abbaan koo naa mure hin canus cabus hin badus Caalaa : Maqaa 2.Caaltuu: Lafee hin qabau ijji isaa dhibbaa Caalaa : Biddeena 3. Caaltuu: Hin dhiqattu hin dhibattu bareeddi Caalaa: Hiddii 4.Caaltuu: Harkaa facaasanii ijaan guuran /funaanan/ Caalaa: Barreeffama